ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အာလူး အာဟာရများ နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
29.6.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ချက်ပြုတ်ရလွယ်ကူပြီး အရသာရှိတဲ့ အာလူးလေးတွေကို မနှစ်သက်သူဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ အစား ကြေး (ဂျီး) များလွန်းတဲ့ ကလေးတွေတောင်မှ အာလူးတွေကို နှစ်သက...
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း - လျစ်လျူရှုမထားသင့်သော သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှ သတိပေးချက်
23.6.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း (fatigue) ဆိုတာ ဘာလဲ? ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တာ (fatigue) နဲ့ ပင်ပန်းတာ (tiredness) ဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲ?
ဖျားနာခြင်းကင်းဝေးစေဖို့ ကိုယ်ခံအားနည်းစေတဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ပြောင်းလဲကြရအောင်
18.6.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ် ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်လား၊ မလုပ်လားဆိုတာ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ မိမိတို့လုပ်မိနေတဲ့ တချို့သောအလေ့အကျ...
နှလုံးသားလေး ကျန်းမာနေစေဖို့ ...
12.6.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မှန်ကန်တဲ့စားသောက်ပုံစားသောက်ပေးခြင်းဟာ အမေရိကန်နှလုံးအဖွဲ့အစည်းက အကြံပြုထားတဲ့ နှလုံးကျန်းမာစေဖို့ အချက် ၇ ချက်ထဲ တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့...
9.6.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ပိုးသတ်ဆေးသောက်ပြီး တစ်နေ့ကို သုံးကြိမ်နဲ့အထက် ဝမ်းအရည်တွေသွားတာကို ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဝမ်းလျှောခြင်း (Antibiotic associated diarrhea) လို့ ခေါ်ပါတယ...
ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်လွယ်ရင် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Probiotics
26.5.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
Probiotics ဆိုတာ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်မှာ ကောင်းကျိုးများစွာပေးနေတဲ့ အကျိုးပြုပိုးမွှားလေးတွေပါ။ သူ့တို့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ဝမ်းပျက်ဝမ်...
19.5.2022 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဓာတ်မတည့်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲက စိတ်ညစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ချောင်းခြောက်ဆိုးတတ်တာပါပဲ။ ချွဲသလိပ်မထွက်ဘဲ ချောင်းဆိုးတာကို ချောင်းခြောက်ဆိုးတယ်လို့ ခေါ...